Kooxda Manchester United oo 48-da saacadood ee soo socota dhammaystiraysa saxiixeeda labaad ee xagaagan – Gool FM
(Manchester) 21 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay dhammaystiri doono saxiixa ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Crystal Palace ee Aaron Wan-Bissaka inta lagu guda jiro 48-da saacadood ee soo aaddan.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa Wan-Bissaka uu yahay mid ka mid ah bartilmaameedyadiisa sare ee uu indhaha ku hayo suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Wararku waxa ay sheegayaan in Man United ay durbadiiba heshiis la gaartay Palace, inkastoo Shabakadda London Evening Standard ay soo jeedinayso in wadahadalladu ay sii socon doonaan iyadoo Palace ay dooneyso lacag dhan 50 milyan oo gini.
Yeelkeede, Manchester United ayaa kalsooni ku qabta inay la soo wareegayso laacibkan 48-da saacadood ee soo socota, taasoo u muuqata in Wan-Bissaka uu noqonayo saxiixii labaad ee kooxda xagaagaan kaddib Daniel James.
Inkastoo 21-sano jirkaan uu ku maqan yahay waajibaadka xulkiisa qaranka England ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 21-jirrada, taasi kama hor’istaagi doonto inuu tijaabada caafimaad u maro kooxda Man United.
RASMI: Kubadda cusub ee lagu ciyaari doono wareegga 16-ka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 oo la shaaciyey.. + SAWIRRO